Wasiir Koore: “Waxaan Wasiir Ka Ahay Wasaaraddii Aan Waardiyaha Ka Ahaa” | Gabiley News Online
Hargeisa (Hargeisa Press)- Taariikh noolaleedka iyo qaabka uu ku gaadhay maqaamka siyaasadeed ee maanta uu joogo wasiirka wasaaradda Warfaafinta Somaliland, Saleebaan Yuusuf Cali (Koore) ayaa ka duwan sida ay dad badan u haystaan.
Saleebaan Cali Koore waxaa uu sanadkii 1984 waardiye ka ahaa xarunta Radio Hargeysa oo hadda ay ku taallo wasaaradda Warfaafinta ee Somaliland.
Wasiir Saleebaan oo sanadkii 1984 ay da’diisu ahayd 18 sano jir ayaa markii uu ka qallin jabiyay dugsiga sare ayaa waxaa uu ka qeybgalay barnaamijkii la odhan jiray shaqo qaran, kaas oo ardayda la gellin jiray mudo laba sano ah kahor inta ayna shaqo billaabin.
“Shaqadii qaranka ayaa la igu soo qoray idaacadda qaranka anigoo arday dugsi sare ka baxay, muddo lix ilaa toddobo bilood ah ayaa habeenkii waxaan waardiye ka qaban jiray idaacadda aan hadda wasiirka u ahay,” ayuu yidhi wasiir Saleebaan.
Wasiir Saleebaan Cali Koore oo idaacada BBC-da u waramay ayaa sheegay in qoyskiisa ay degenaayeen miyiga, markii uu shaqada qabtana bishii lacag dhan 120 shilin Soomaali ah mushahar ahaan loo siin jiray, lacagtaas oo uu sheegay in ay aad u yareyd oo ay u goyn jirtay oo keliya dhar dhaqaalka, kirada iyo waxyaabo lamid ah.
Mashruuca shaqo qaran ayuu sheegay inuu ahaa mid qof walba oo soo dhameeyo dugsiga sare uu qaban jiray, waxaana uu yidhi: “xafiiska aan hadda ka shaqeeyo waagaasi ma aanan geli jirin oo la iima oggoleyn, maadaam aan ahaa waardiye”.
Wasiir Koore wuxuu sheegay in shaqo badan uu Somaliland kasoo qabtay tan iyo sanadkii 1991, xilal badan oo wasaaradda Biyaha ay u dambeysay uu soo maray oo wasiirnimada ayna ku cusbeyn, balse xilka wasaradda warfaafinta markii dhawaan loo magacaabay ay ahmiyad gaar ah u lahayd, maadaama albaabkii uu ilaalin jiray haatan isaga lagu ilaaliyo.
“Wasaaraddii anigoo yar aan waardiyaha ka ahaa in aan wasiir ka noqdo macno gaar ah ayay ii sameneysaa, qofkii maqlana macno ayay u sameyneysaa, maadaam xilligaas aan ahaa wiil yar oo qori albaabka la taagan” ayuu ku daray wasiir Saleebaan Cali Koore oo sheegay in shaqada qaran kahor loo tababaray askarinimo.
Hase yeeshee heerka uu noolasha kasoo maray wasiir Saleebaan ayaa ah mid dhiiragelin leh, maadaama ay adag tahay in qof uu wasiir ka noqdo albaabkii uu ilaalin jiray.